दिपशिखाले आखिर किन गरिन् मुण्डन ? | Sagarmatha TV
दिपशिखाले आखिर किन गरिन् मुण्डन ?
बिहिबार, अशोज १८, २०७५
काठमाडौं । जनक पाण्डेको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘प्रेमलिला’मा अभिनेत्री दिपशिखा खड्का फरक ‘गेटअप’मा देखिएकी छिन् । बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच चलचित्र प्रेमलिलाको फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । पोष्टर सार्वजनिकसँगै चलचित्रको रिलिज मिति पनि घोषणा भएको छ । चलचित्र माघ २५ गतेबाट देशभरिका सिनेमा घरहरुबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।
नायिका दिपशिखाले यस अगाडिका आफ्ना सिनेमाले आफूलाई नचिनाएको भन्दै यो डेब्यू भएको बताइन् । जनक पाण्डेको निर्देशनमा तयार भएको सिनेमामा दीपशिखाले कपाल मुन्डन गरेकी छिन् । उनले यो गेटअपका कारणले पनि सिनेमा भित्र केही छ भन्ने थाहा हुने बताइन् । कपाल मुण्डन गर्दा साह्रै दुःख लाग्यो । तर, कथाले मागेपछि गर्नैप¥यो ।’ उनले सिनेमाको छायांकन सकिएपछि निर्देशकले वास्ता गर्न छाडेको गुनासो समेत गरिन् ।
सिनेमामा उनको साथमा दुबइमा रहेर मोडलिङ गर्दै आएका भारतीय मोडल अली खान र नव–कलाकार मौसम खड्काको मुख्य भूमिका छ । भारतबाट नेपाल आएको यूवा र नेपालमा रहँदै आएकी यूवतीविचको प्रेमकथालाई सिनेमाले उठान गरेको दीपशिखाले जानकारी दिइन् । यस्तै, कलाकार अली खानले दीपशिखासँग दुबइमा भेट भएपछि आफू नेपाल आएको र कथावस्तु सुनेपछि काम गर्न उत्साहित भएको सुनाए ।